Cofa kwaye ucofe iifayile kwiLinux | Ukusuka kwiLinux
Indlela yokucinezela kunye nokudibanisa iifayile kwiLinux
UIsake | | Izifundo / iincwadi / Iingcebiso
Kule nqaku siza kukufundisa cinezela kwaye unciphise iifayile Ukusasazwa kwe-GNU / Linux oyithandayo, yonke imiyalelo usebenzisa ikhonsoli. Inqaku elijolise kubaqalayo kwaye kuyo asizukubandakanya unyango lweetarballs njengakwezinye izifundo, kuba iya kubonisa kuphela ukuba uxinzelelo kunye noxinzelelo lwenziwa njani ngaphandle kokupakisha ngesixhobo setela esimangalisayo.
Nangona uxinzelelo kunye nokudodobala kulula, abasebenzisi bahlala bekhangela i-Intanethi ngendlela yokwenza ezi zenzo. Ndicinga ukuba ngokungafaniyo nezinye iinkqubo zokusebenza ezinje ngeMacOS kunye neeWindows apho kusetyenziswa izixhobo ezizodwa kunye nezinomdla, kwi-GNU / Linux zihlala ziboniswa. ezinye iifomathi kunye nezixhobo ezahlukeneyo nganye nganye, nangona kukho izixhobo ezilula kwinqanaba lomzobo ...
Uxinzelelo kunye nokudodobala siza kusebenzisa iipasile ezimbini ezisisiseko, kuba zezona fomathi zifunwayo kunye nezo sidibana nazo rhoqo xa sisebenza Iinkqubo ezifana ne-Unix. Ndibhekisa kwi-gzip kunye ne-bzip2.
1 Ukusebenza ngegzip
ukuba compress nge gzip, Ifomathi esiza kuyiphatha yiLempel-Zi (LZ77), hayi iZIP enjalo, kuba igama linokukhokelela kwisiphithiphithi. Igama livela kwi-GNU ZIP, kwaye lenziwa njengendawo yefomathi ye-ZIP, kodwa ayifani. Ndifuna ukuyicacisa ... Kulungile, ukucinezela ifayile
Oku kuvelisa ifayile enegama elilingana neyoqobo kunye nolwandiso .gz, kumzekelo odlulileyo iya kuba document.txt.gz. Endaweni yokuba guqula igama Iziphumo ezizodwa:
ukuba vula Into esele icinezelwe ilula ngokulinganayo, nangona sinokusebenzisa imiyalelo emibini eyahlukileyo enefuthe elifanayo:
Kwaye siya kuyifumana ifayile ungatyiswanga ngaphandle kolwandiso lweg.
Ewe bzip2, Iyafana nenkqubo edlulileyo, kodwa nge-compression algorithm eyahlukileyo ebizwa ngokuba yiBurrows-Wheeler kunye neHuffman coding. Ulwandiso esinalo kule meko .bz2. Ukuze ucinezele ifayile, kufuneka sisebenzise:
Oku kukhokelela kuxwebhu olucinezelweyo.txt.bz2. Singahluka kwakhona igama lokuphuma kunye -c ukhetho:
Ukudodobala ndingasebenzisa -d ukhetho lwesixhobo se-bunzip2 esili-alias:
Ngolwazi oluthe kratya onokuzisebenzisa Ndoda kulandelwa ngumyalelo ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukusuka kwiLinux » Izifundo / iincwadi / Iingcebiso » Indlela yokucinezela kunye nokudibanisa iifayile kwiLinux
UJaime Perea sitsho
Enkosi kakhulu kwizithuba zakho, zihlala ziluncedo.
Mhlawumbi kunokuba ngumdla ukukhankanya i-xz, njengoko ikwasetyenziswa kancinci. Ibeka kwindawo ethile phakathi kwe-bzip2 (iyacotha, kodwa icinezela kakhulu) kunye ne-gzip (ngokukhawuleza, kodwa kungasebenzi kakuhle). Oku kuluhlu olukhulu, kuba njengayo yonke into ... kuyaxhomekeka. Iifayile ezifakwe kwiifayile zeDebian / Ubuntu .deb zihlala zixinaniswe kwifomathi ye-xz.
Indlela yokuyisebenzisa iyafana neminye imiyalelo ye-sos.
Phendula kuJaime Perea
Molo, ndicela ukubuza ukuba makwenziwe kodwa nge-tar.gz kuba isetyenziswa kakhulu (ngokoluvo lwam ngayo yonke into endiyikhuphelayo kwi-intanethi)
Bathini malunga neefomathi ezithandwayo kodwa zeqonga elinje nge .7z? Bamele babathiye nabo
Molo Jose, kwenzeka ntoni ngeefayile ze-tar.gz kukuba usebenzisa omnye umyalelo oyi-tar kwaye kule meko umthetho we-tar ngokwawo awucinezeli (okanye udilize) kodwa usetyenziselwa ukwenza iqela (okanye ukungadibanisi) Iifayile ezininzi kwenye, le inokudityaniswa nomyalelo we-gzip kunye ne-bzip2 onokucinezela kunye nokudibanisa.
Unyanisile, u-Ernesto, ngefomathi yasimahla ye-7z eyenza isifotho kwiWindows, endaweni ye-zip kunye ne-rar, kwaye abayikhankanyi?
Kwinkulungwane yama-21 kwaye usasebenzisa imiyalelo yokucinezela ifayile elula? Esi sithuba sibuhlungu
Mhlawumbi inokuba inomdla nayo
Digitize iiteyiphu zeVHS kusasazo lwakho lwe-GNU / Linux
IPlatzi: Iqonga elichazayo lokufunda ngetekhnoloji (Amava am)